/ Products / Xabbad dufan leh / Budada loo yaqaan "synephrine"
SKU: 94-07-5. Category: Xabbad dufan leh
Formula kelli: C9H13NO2
Miisaankani waa: 167.21
Daawada kiniiniga ah ee "prosephrine" waa alkaloid dabiici ah oo loo arko inuu yahay kiciyaha iyo buolotikada sababtoo ah waxay saamayn ku yeelanaysaa miisaan lumis iyo hababka garashada ee maskaxda. Daawada dabiiciga ah ee dabiiciga ah waxaa laga helaa dhir iyo xayawaan qaar, gaar ahaan budada Synephrine ee laga helo dheellitirka cuntada ayaa laga soo saaraa oo laga soo saaraa Citrus Aurantium Plant oo badanaa loo yaqaan 'Bitter Orange'.
Si looga faa'iidaysto sifooyinka jirka iyo tamarta ee budada loo yaqaan 'Phentipine Powder', waxaa ugu wanaagsan in la qaato subaxdii hore ama 15 - 30 daqiiqado ka hor jimicsi. Diyaargarowga hore iyo dufanka luminta lakabadda ee ku jira kiimikada "Synephrine budada" waa in la qaataa biyaha ka hor inta aan jimicsiga. Qiyaasta ugu waxtarka badan waa 15 - 25 milligrams per serving.
Ka sokow awooda lagu xakameynayo cunto yaryar, budada Synephrine ayaa muujinaya calaamad muujinaysa eber inuu awoodo inuu gubto dufka naftiisa. Sidaa daraadeed, budada sarrifin la'aanta ah looma tixgelin karo inay noqoto dufan gubanaya. Adigoo qaadanaya budada sunta ah ee sunta leh ee dufanka, waxaad dareemi doontaa inaadan yareyn doonin inaad cunto fududeysid intaad ku jirtid intaad ku sii jiri doontid muddo dheer oo aad ku dhawdahay rabtid inaad cuntid wixii ka baxsan habka maalin walba ah.
Xaqiiqadu waxay tahay haddii aad tahay dadka intiisa badan, ma dareemin inaad wax badan ogeysiisid markaad qaadato kareemka sunta (Synephrine powder) Inta badan soo sheegaan koror yar oo tamar leh iyada oo aan midkoodna hoos udhicin guud ahaan la xidhiidha kiciyeyaasha (jitters, lallabo, wadne garaac degdeg ah, iwm. ).
Synephrine Rootiga Rootiga ah:
Daaweynta budada ah ee 'emphrine' ma caawisaa miisaanka lumay?